Kooxda Real Madrid Ayaa 2-1 Ku Garaacday Barcelona Markii Ugu Horeysay ‘Classico’ Kadib Messi -
HomeciyaarahaKooxda Real Madrid Ayaa 2-1 Ku Garaacday Barcelona Markii Ugu Horeysay ‘Classico’ Kadib Messi
Kooxda Real Madrid Ayaa 2-1 Ku Garaacday Barcelona Markii Ugu Horeysay ‘Classico’ Kadib Messi
October 25, 2021 F.G ciyaaraha, Wararka 0
Real Madrid ayaa mar kale cadaadis saartay tababaraha Barcelona Ronald Koeman markii David Alaba uu dhaliyay gool cajiib ah oo ka caawiyay inay 2-1 kaga badiyaan El Clásico ciyaar ka dhacday Camp Nou Axadii.
Labadii darbo ee Alaba ayaa Madrid inta badan ciyaarta ku jirtay bilawgii ilaa dhammaad, iyadoo Lucas Vázquez uu laba jeer sameeyay waqtiga dhaawaca ka hor inta uusan Sergio Agüero goolkiisii ​​ugu horreeyay u dhalin Barcelona oo ilbiriqsiyo ka harsan yihiin.
Barça ayaa haatan lumisay Classic Classic ah markii afaraad oo xiriir ah markii ugu horeysay tan iyo 1965 waxayna weli ku jirtaa kaalinta sideedaad ee La Liga, iyadoo shan dhibcood ka dambeysa Madrid, oo ku soo laabatay hogaanka horyaalka.
Ka dib markii ay garaaceen Valencia oo ay ku guuleysteen kulan muhiim ah oo Champions League ah oo ay la ciyaareen Dynamo Kiev usbuucan, waxay ka dhigan tahay dib u dhac kale oo Barça iyo Koeman ah, kuwaas oo mar kale mustaqbalkooda la hubin doono.
Dhanka kale, Madrid, waxay u aragtaa soo kabashadooda inay sii xoogeysaneyso, ka dib markii ay taageertay guushii weyneyd ee Shakhtar Donetsk si ay uga tagto tartan dhagaxa leh muraayada gadaasha.
Kani wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey ee horyaalka ee dhexmara kooxahan oo ay ka maqnaayeen Lionel Messi iyo Sergio Ramos tan iyo 2005 -tii, in kasta oo ay weli jireen halyeeyadii la soo bandhigay, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Gerard Piqué iyo Sergio Busquets, dhammaantood waxay bilaabeen, waxay ahayd mid kale Classic ku saabsan mustaqbalka.
Markii ugu horeysay muddo 65 sano ah, lix ciyaaryahan oo ay da’doodu ka yar tahay 22 sano jir ayaa bilaabay ciyaarta, halka Gavi, oo 17 jir ah oo khadka dhexe ka ciyaara Barcelona, ​​uu ahaa ciyaaryahankii ugu da’da yaraa ee Barça ee Clásico ku dhawaad ​​qarni.
Xayeysiinta labada duub ee Ansu Fati iyo Vinicius Junior ayaa laga yaabaa inay dareemeen xoogaa qasab ah, laakiin labada ciyaaryahanba waxay noqdeen astaamaha rajada.
Fati waxay u dulqaadatay mid ka mid ah cayaarahaas oo mararka qaarkood laga filayo 18 jir, iyadoo marmar hanjabaaddu ka soo muuqatay shaashadda ka xasilloon intii uu jeclaan lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, Vinicius, wuxuu ahaa koronto bilowgii, qodax joogto ah oo dhanka Barcelona ah, gaar ahaan qeybta hore, waxaana uu qeyb ka ahaa weerar celiskii ugu fiicnaa ee Alaba.
Barcelona ayaa bilowgii ciyaartaba ahayd kooxda ugu go’aansaneed iyaga oo soo dhisay ismari waaga ciyaarta iyaga oo kubbada maamulayay, laakiin Madrid ayaa ku faraxsanayd in ay si qoto dheer u fadhiistaan ​​isla markaana ay dhibka ugu wayn soo galeen waqtigii nasashada.
Vincius ayaa Oscar Mingueza ku garaacay si qurux badan lugaha qofka ka soo horjeeda markii Mingueza uu siibtay si uu u soo kabsado, Vinicius ayaa ku soo orday isaga oo dhulka ku dhacay. Xiriirku aad buu u yaraa garsooraha kuma qancin.
Wax yar ka dib, Vinicius ayaa soo laabtay, iyadoo ku celisyadii lagu celiyay ay muujinayaan inuu offside ku jiro, Marc-Andre ter Stegen ayaa si cajiib ah u dejiyay weeraryahanka, isaga oo banaanka u saaray islamarkaana ku qasbay daafacyada inay dib u celiyaan.
Dhexda, Barca ayaa maamulaysay kubbadda, qaab -dhismeedkooda dulqaadka badan wuxuu fursad dahabi ah siiyay Sergino Dest, Ameerikaanku wuxuu aad uga bartay dhinaca midig marka loo eego dambeedka midig, kaasoo dhaafay lix yaardi kadib markii Memphis Depay uu siibtay.
Madrid ayaa daqiiqadii 32-aad gool cajiib ah ka dhalisay kooxda Barcelona. Alaba wuxuu ku garaacay Depay cirifka sanduuqiisa oo wuu sii socday, isagoo markii hore doonayay inuu ka soo dego khadka Vinicius, kaasoo beddel u noqday Rodrygo.
Markan Alaba wuu soo kabsan lahaa, waxaa booskiisa u furay kubad uu Benzema ku leexiyay, cidhifka aaggana wuxuu kubad u leexiyay birta fog.
Benzema iyo Fati ayaa aad isugu dhawaa ka hor nasiinada, markii Koeman uu Mingueza u soo bandhigay Philippe Coutinho wuxuuna ka baxay 4-3-3 ilaa 4-2-3-1.
Barcelona kalsooni ayay ku korartay waqtiga ka hor. Darbadii Fati ayaa heshay Thibaut Courtois. Jordi Alba ayaa xoreeyay ka dib markii ay isku dhaceen Rodrygo. Coutinho ayaa si toos ah ugu leexiyay dhanka Dest.
Si kastaba ha ahaatee, Madrid ayaa badbaaday oo halis gashay hal ilbiriqsi markii uu Luka Modric dadaalkiisa dabacsanaantiisa la joojiyay ka dibna uu weeraray Benzema, kaasoo kubad ku dhuftay Ter Stegen.
Ciyaartu way fidday waxaana halkaas ku dhammaaday riwaayad.
Piqué ayaa doonayay rigoore markii laga hor istaagay inuu ku dhameystiro aagga isla markaana weerar rogaal celis ah Madrid ayaa labanlaabtay, darbadii Marco Asensio ayaa xaaqday Vázquez daqiiqaddii 93aad.
Weli waxaa jiray waqti uu gool ka dhaliyo Agüero isagoo 97 jir ah, darbo xoog leh oo uu Dest ka soo tuuray xarun, laakiin uma noqon soo laabashada.